Barashada Jarmalka Deeq waxbarasho oo dhamaystiran 2021 Xariirka Foomka Codsiga: Akhbaaraha Iskuulka ee Hadda
Barashada Jarmalka Deeq waxbarasho oo dhameystiran 2021 Xariirka Foomka Codsiga
Filed in Cusboonaysiinta deeqaha waxbarasho by Tifaftirayaasha TMLT Juun 17, 2021
Barashada Jarmalka Deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo: Jarmalka gudaheeda, waxbarashadu waa mid fudud. Waxaa jira deeqo waxbarasho oo taas ka dhigaysa mid suurtagal ah. Sidoo kale, qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho waxay la yimaadaan xirmooyin yaab leh.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato kuwan deeq waxbarasho, fiiro gaar ah u yeelo macluumaadka ku jira qodobkan. Qodobkaan, waxaad ku baran doontaa meesha / sida loo dalbado deeqaha waxbarasho.
Daraasad Cajiib ah oo ka dhacday Jarmalka Deeq waxbarasho oo dhamaystiran oo loogu talagalay 2021
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah wax ku barta Jarmalka deeq waxbarasho oo buuxda:
1. Deeqda waxbarasho ee DAAD ee Jarmalka ee Koorsooyinka Postgraduate-ka ee La xiriira Horumarinta
Tani waa mid ka mid ah daraasaddaha Jarmalka si buuxda loo maalgeliyey deeq waxbarasho. Sidoo kale, waxay ka kooban tahay labadaba Masters iyo PhD Degree. Waxaana bixiya Adeegga Isdhaafsiga Tacliinta Jarmalka (DAAD).
Intaa waxaa sii dheer, waxay siisaa ardayda ka qalin-jabisay shisheeyaha ee horumarka iyo waddamada cusub ee warshadaha soo saaray fursad weyn. Sidoo kale, waxay ka kooban tahay dhammaan qeybaha kala duwan. Waxayna caawinaysaa shisheeyaha qalinjabiyey qaado shahaadada jaamacadeed ama Shahaadada Masterka heer gobol ama gobol la aqoonsan yahay Jaamacada Jarmalka.
Sidoo kale, xaaladaha gaarka ah, waxay ka caawisaa inay qaataan a shahaadada dhakhtarnimada. Iyo inaad hesho aqoonsi jaamacadeed (Master's / PhD) Jarmalka. Si kastaba ha noqotee, asal ahaan waxay bartilmaameedsataa xirfadlayaal da 'yar oo ka socda wadamada soo koraya.
Inta Award: Deeqaha waxbarasho waxaa ka mid ah bixinta bil kasta ee 850 euro ardayda qalin jabisa. Iyo 1,200 Euros oo loogu talagalay musharixiinta dhakhaatiirta.
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu u shaqeeyaa hay'ad dowladeed ama dowlad ama shirkad gaar loo leeyahay oo ka jirta waddan soo koraya. Sidoo kale, waa inuu haystaa shahaadada Bachelor-ka. Waana inuu dhammaystiray shahaado tacliimeed oo leh natiijooyin celcelis ahaan aad uga sarreeya. Intaa waxaa sii dheer, shahaadooyinkiisa / aqoonteeda waa inaysan ka badnaan 6 sano.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: Ogast-Oktoobar, 2021.
Codsiga: Riix halkan
2. KAAD Deeqaha waxbarasho ee Jarmalka loogu talagalay Wadamada soo koraya
Deeqda waxbarasho ee KAAD waxaa lagu hagaajiyaa ardayga qalin-jabiya. Sidoo kale, waxay ku wajahan yihiin aqoonyahanno horeyba u helay khibrad xirfadeed. Iyo kuwa xiiseynaya daraasadaha jaamacadeed ee Jarmalka.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in deeqdani ay ku wajahan tahay muwaadiniinta laga soo xulay dalalka soo koraya ama soo koraya ee Afrika. Sidoo kale, kuwa Aasiya, Bariga Dhexe ama Latin Amerika. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira doorbidid codsadayaasha Katooliga. Si kastaba ha noqotee, waad booqan kartaa xiriirka hoose si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Inta Award: Lama sheegin. Si kastaba ha noqotee, waad codsan kartaa xiriirka hoose si aad u hesho faahfaahin.
Shuruudaha: Codsadeyaasha loogu talagalay Master-scholarships waa inay ahaadaan ugu badnaan da'da 30. Halka codsadayaasha PhD-deeqda waxbarasho aysan ka weynayn 35. Sidoo kale, codsaduhu waa inuu ka yimaadaa waddan soo koraya ama soo koraya oo ku yaal Afrika, Aasiya, Bariga Dhexe ama Latin Amerika. Waana inuu haystaa shahaado jaamacadeed.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta:15 Janaayo / 30 Juun sanad walba.
3. Finduddannelse.dk deeqda waxbarasho waarta
Tani waa deeq waxbarasho oo la siiyay Finduddannelse DK. Sidoo kale tani waa mid ka mid ah daraasadda Jarmalka oo si buuxda loo maalgeliyey deeq waxbarasho. Marka laga helo finduddannelse.dk waxay aaminsan tahay in ardayda maanta, iyada oo loo marayo cilmi baaris iyo meeleyn shaqo mustaqbalka ay gacan ka geysan karto qaabeynta adduunka berri si wanaagsan.
Marka, baahida loo qabo bixinta deeq waxbarasho oo gaareysa € 5000 waa muhiim. Waana inay ka caawiso daboolida khidmadaha waxbaridda iyo in ardaygu u helo hal tallaabo oo u soo dhowaado, waxaan rajeynayaa, xirfadda adduunka beddelaysa.
Sidoo kale, deeqda waxbarasho waxaa la siin doonaa xilli-dugsiyeedka deyrta / deyrta ee 2021. Waana u furan tahay dadka meel kasta oo ay dunida ka joogaan ee doonaya inay barnaamijka masterka taasi waxay gacan ka geysaneysaa sidii adduunka looga dhigi lahaa mid waara.
Inta Award: € 5000.
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu dalbaday (ama codsan doonaa) barnaamijka sayidkiisa kaas oo ka caawin kara isaga / iyada inay adduunka ka dhigaan mid waara. Sidoo kale, waa inuu dalbaday (ama codsan doonaa) daraasad ka bilaabmaysa Dayrta Dayrta 2021. Hayso shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 12 April, 2021.
4. Deeqda waxbarasho ee Ka-dhaafida Imtixaanka IELTS
Shahaadada IELTS waxay leedahay awood ay albaabada ugu sii furto ardayda caalamiga ah ee tacliinta. Sidoo kale, iyo sidoo kale xagga dhismaha xirfadda.
Intaas waxaa sii dheer, qiyaas ahaan, ku dhowaad 5 milyan oo arday ayaa u muuqda imtaxaanka IELTS ee ka socda 140 quruumood sannad kasta.
Halka ay jiraan arday badan oo karti leh oo awood u leh inay ku cadeeyaan imtixaankan IELTS ee fasalada wanaagsan, ogow. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinka dhaqaale awgood ardayda noocaas ah waxay ka quustaan ​​qaadashada imtixaanka IELTS. Sidaa awgeed, deeqdani waxay noqoneysaa mid lagama maarmaan ah maaddaama ay kafaala qaado Khidmadaha Imtixaanka IELTS.
Inta Award: Lama sheegin.
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu kayar yahay 32 sano. Sidoo kale, waa inuu ku nadiifiyey Dugsiga Sare ugu yaraan 75% calaamado. Intaa waxaa sii dheer, waa inuu cadeeyay koorsooyinka hoose ee ugu yaraan 3.0 GPA. Si kastaba ha noqotee, waxaad faahfaahin dheeraad ah ka heli kartaa isku xirka arjiga ee hoose.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 30 Ogosto, 2021.
5. 2021 Deeqo-waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Jaamacadeed
Mar labaad, tani waa mid ka mid ah daraasadda Jarmalka oo si buuxda loo maalgeliyey deeq waxbarasho. Sidoo kale, deeqdani waxay siisaa arday u qalma fursad uu ku guuleysto mid ka mid ah $ 500 - $ 1500 deeq waxbarasho.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay ku jirtaa dadaal lagu caawinayo kharashaadka sii socoshada waxbarashada. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah xiriirka arjiga hoose.
Inta Award: Uguyar $ 500.
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu noqdaa arday dhigta dugsiga sare. Sidoo kale, ama arday ka mid ah kulliyadaha, oo ay ku jiraan murashaxiinta shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 30 Oktoobar, 2021.
6. Deeqda waxbarasho ee Katoni - Taageerida mashaariicda dhaqanka
Mar labaad, tani waa mid ka mid ah daraasadda Jarmalka oo si buuxda loo maalgeliyey deeq waxbarasho. Waxaana bixiya Katoni. Sidoo kale, waxaa la siiyaa sanadkiiba hal qof ama in ka badan oo qof oo u baahan taageero maaliyadeed oo loogu talagalay waxbarashadooda, tababar shaqo ama ka dhex shaqeeya aagga dhaqanka.
Intaas waxaa sii dheer, ujeedada deeqdan waxbarasho waa in lagu taageero deenishka iyo muwaadiniinta ajaanibta ah ee ka shaqeeya gaar ahaan xoojinta dhaqanka Danmark iyo xudduudaha.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa la siiyaa cilmi baarayaasha. Iyo ardayda aduunka oo idil. Dhaqanku waxaa ka mid ah, isgaarsiinta, luqadda, moodada, farshaxanka, caadooyinka, iwm.
Inta Award: $ 10,000
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu ahaadaa cilmi-baare. Sidoo kale, waa inuu noqdaa arday iyo arday hore uga jiray goobaha waxbarashada.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 1 May, 2021.
7. Qoraalka Tartan Aqooneedka 2021
Sidoo kale, kani waa mid ka mid ah daraasadda Jarmalka oo si buuxda loo maalgeliyey deeq waxbarasho. Mid ka mid ah himilooyinka ayaa ah in lagu dhiirrigeliyo ardayda inay horumariyaan xirfadahooda qorista iyo ku celcelinta sameynta waraaqaha guuleysta.
Marka, arday ahaan, waad aqbali kartaa caqabad waxaadna ka qayb qaadan kartaa tartanka maqaalka deeqda waxbarasho. Waxaa jiri doona seddex guuleyste. Saddexda guuleyste waxay heli doonaan abaalmarinno lacag ah.
Intaa waxaa sii dheer, waraaqaha ugu fiican ayaa lagu daabici doonaa websaydhka deeqda waxbarasho. Iyo baraha bulshada. Si kastaba ha noqotee, taasi waa haddii qoraagu oggolaado.
Inta Award: $ 2,000
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu noqdaa qalinjabiye ama shahaadada koowaad. Sidoo kale, ma jiraan wax xadidan oo ku saabsan da'da, jinsiyadda, ama jinsiga. Si kastaba ha noqotee, waxaad xor u tahay inaad booqato isku xirka arjiga ee hoose si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 31 May, 2021.
8. Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Musharrixiinta ugu Fiican - Jaamacadda Kozminski
Deeqdani waxay u heellan tahay dhammaan musharixiinta codsanaya jaamacadda Kozminski ee Bachelor-ka ama barnaamijyada Master. Sidoo kale, waa deeq waxbarasho oo ay bixiso Jaamacadda Kozminski.
Mar labaad, waa mid ka mid ah daraasadda Jarmalka si buuxda loo maalgeliyo deeq waxbarasho. Si kastaba ha noqotee, wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan deeqdan waxbarasho, booqo isku xirka arjiga ee hoose.
Inta Award: 56% ee waxbarashada semestarka - U dhiganta 7500 PLN.
Shuruudaha: Booqo xiriirinta arjiga ee hoose si aad u hesho macluumaadkan.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 15 July 2021.
9. Deeqda-waxbarasho ee MBA ee waqtiga buuxa ee Manchester
Sannad kasta deeqdani waxay taageertaa kuwa ugu kartida badan MBA. Sidoo kale, waxay u oggolaaneysaa codsadayaasha ugu kartida badan fursad ay uga faa'iideystaan ​​waayo-aragnimada Manchester MBA.
Mar labaad, fadlan fiiro gaar ah. Waa mid ka mid ah daraasaddaha Jarmalka si buuxda loo maalgeliyo deeq waxbarasho. Si kastaba ha noqotee, wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan deeqdan waxbarasho, booqo xiriirka arjiga hoose.
Inta Award: £ 10,000 - £ 44,000.
Shuruudaha: Codsaduhu waa inuu haystaa aqoonsi aqoonsi oo wanaagsan. Sidoo kale, waa inuu lahaadaa rikoor xirfad-yaqaan wanaagsan. Iyo xirfadaha wada xiriirka iyo is dhexgalka dadka. Sidoo kale, waa inuu lahaadaa qiyam iyo anshax adag. Iyo suurtagalnimada in lagu noqdo hogaamiye ganacsi oo caan ah ama ganacsade iyo danjiraha mustaqbalka ee Iskuulka.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 1 Juun, 2021.
10. Deeqda waxbarasho ee EUSP ee Ardayda Hibada leh ee Yurub
Barnaamijka deeqda waxbarasho ee EUSP waxaa loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Sidoo kale, sanad walba, koox yar, tayo sare leh oo ardayda hibada leh ayaa la siiyaa deeqo waxbarasho oo ku saleysan baahi.
Tani waa qayb ka mid ah Barnaamijka Aqoonyahannada EUSP ee loogu talagay waxbarashada dekedda. Abaalmarinta badankood, EUSP waxay tixgelisaa guul gaadhka tacliimeed oo keliya.
Inta Award: € 1000 ilaa € 15,000 sanadkii.
Shuruudaha: Codsadeyaashu waa inay noqdaan arday waqti-buuxa ah. Waana in lagu qoraa xarun waxbarasho oo qaran ahaan laga aqoonsan yahay Yurub. Sidoo kale, waa inuu lahaadaa ugu yaraan kulliyadda GPA ee 3.0.
Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: 30 Noofambar, 2021.
Waxyaabaha kor ku xusan waa qaar ka mid ah kuwa layaabka leh deeq waxbarasho gudaha Jarmalka. Si fiican u samee inaad dalbato. Si kastaba ha noqotee, kahor intaadan dalban, ogow. Hubso inaad buuxisay shuruudaha.
Sidoo kale, waa muhiim inaad qaadato shuruudaha u-qalmitaanka mid aad u culus. Tani waa sababta oo ah, waad u qalmi kartaa haddii aad dayacdo iyaga. Intaas waxaa sii dheer, had iyo jeer xor u noqo inaad booqato boggan wixii cusbooneysiin ah sidan oo kale. Nasiib wacan
Hada Ka Codso Qorista NetApp ee Wakiilka Iibinta Shahaadada
Diidmada Shaqaalaynta Sanduuqa Shaqada ee Gobolka Lagos (LSETF)
Man United Net Worth 2020 iyo Ciyaartoyda Xilligaas Mushaharka
Hada Ka Dalbo Cummins Nigeria Shaqo Maamulaha HR
Ogeysiiska LASU Disclaimer Ogeysiis ku saabsan Bixinta Lacagta Aqbalaadda & Caddaynta 2017/2018
Euro Mega Atlantic Nigeria Xariirka Shaqaalaynta Xaddidan 2020 | www.euro-mega.net
FCEKANO Gelitaan Toos ah Su'aalo Hore 2021 & Jawaabo PDF Download
« Tababbarka Bangiga Adduunka 2021 Cusboonaysiinta Codsiga iyo Waqtiga Kama Dambaynta Rasmiga ah
17 Deeqaha Injineerinka ee si buuxda u Maalgaliya 2021/2022 Cusbooneysiinta Xariirka »
Foomka Codsiga Bakhtiyaanasiibka Brazil 2020/2021 iyo Sida Loo Codsado
Foomka Ogolaanshaha Maurid Poly HND & Degree 2021/2022 Fadhiga Tacliinta
Xafladda Qalinjebinta OOU Taariikhda 2021/2022 Kalfadhiga Waxbarashada
Ogosto 2021 Xigasho Murugo leh oo Xusuus mudan si loo muujiyo sida raaligelin aad u dareento
Ogosto 2021 Farriinta Dhalashada Quruxda badan ee Hooyo si loogu Dabaaldego Hooyadaa
Farqiga u dhexeeya Dibloomada Dugsiga Sare iyo Shahaadada Dugsiga Sare
Ernst & Young (EY) Qorista 2021/2022 Cusbooneysiinta Codsiyada Ugu Dambeeya
Ernst & Young (EY) Shaqada Bannaanka Shaqada 2021 www.ey.com
NGO Jobs in Nigeria 2021 Eeg Jilaagii Ugu Dambeeyay Jooga Shaqooyinka
Soo galitaanka Xariirka Npower npvn.npower.gov.ng/login 2021/2022 Access Account
NGO Shaqooyinka Nigeria 2021/2022 Cusboonaysiinta: Hubi Shuruudaha U-qalmitaanka
Qorista Shahaadada Guud ee General Electric Nigeria 2017 | Tilmaamaha Codsiga GE iyo Shuruudaha
Shaqooyinka PhD ee Nigeria 2021 Hubi Top 10 Shaqooyinka Shaqo ee Dadka haysta PhD
Qiimaha Fasaxa ee Kosovo 2021 Luqadda, Fiiga Fiisaha iyo Xarumaha Dalxiiska
www.npower.gov.ng Xidhiidhka Soo-galista Rasmiga ah Xariirka Diiwaangelinta 2021